बाँके प्रशासन चुक्दाको परिणाम, बढ्यो कोरोना संक्रमण ! – Himalitimes
बाँके प्रशासन चुक्दाको परिणाम, बढ्यो कोरोना संक्रमण !
२०७७ बैशाख २१ २०:२८ मा प्रकाशित
काठमाडौ । लकडाउनमा नागरिकको चरम लापरबाही र स्थानीय प्रशासनको कमजोरीले बाँकेमा कोरोना भाइरस संक्रमण उच्च बन्ने देखिएको छ । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा संक्रमण बढ्ने स्थानीय बुद्धिजिबिको आरोप छ ।
सरकारले कोरोना रोकथामका लागि समयमै देशभर लकडाउन गरेपनी बाके जिल्लामा भने स्थानीय प्रशासनले कडाईका साथ लकडाउन पालना गर्न नसकेको आरोप लागेको छ । लकडाउनको समयमा पनि जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका पसल बजार खोल्न दिइनु ,आवातजावत कडाइ गर्न प्रशासन चुक्नु र बन्दाबन्दिमा मस्जिदमा नमाज पढ्न दिइनुले पनि कोरोना संक्रमणको दर जिल्लामा बढ्ने जिल्लाबासीको आरोप छ ।
जिल्लामा अहिलेसम्म १६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भैसकेको छ । कोरोना संक्रमण बढी हुनेमा उदयपुर पछि बाँके बन्न पुग्यो ।
अन्य जिल्लामा लकडाउन पुर्णरुपमा पालना भईरहेको बेला बाकेमा भने लकडाउनको समयमा समेत केही ह्प्ता अघिसम्म साझ ४ बजेसम्म पसल खुलेका थिए । जसका कारण स्थानीय पसल,बजार र बैंकमा समेत भिड देखिन्थ्यो ।
नागरिकको चर्को आलोचना गरेपछि बाके प्रशासनले बिहान १० बजेपछि पसल खोल्न नपाईने निर्णय गरेको थियो । भारतबाट आएका व्यक्ति समेत क्वारेन्टाइनबाट भागेर समुदायमा घुलमिल हुनु,सीमानाकामा कडाइ गर्न नसक्नुमा पनि स्थानीय प्रशासन चुकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
जिल्लामा कोरोना संक्रमण र लकडाउन उलंघनका घटना बढ्न थालेपछि स्थानीयले सेना परिचालनको माग गरेका छ्न ।जिल्लामा अझपनि लकडाउन पुर्ण पालना नगरिय स्थिति झन् जटिल बन्ने देखिन्छ ।
नेपालगञ्जमा थप ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,नेपालमा संक्रमितको सङ्ख्या ७५ पुग्यो
कोरोना कहर: विश्वभर दुईलाख ४८ हजार बढिको मृत्यु,५० हजारको अबस्था गम्भीर